Daahfurka Machadka Indhoolayaasha Galmudug – Sen. Abshir Axmad
Daahfurka Machadka Indhoolayaasha Galmudug
Tan iyo markii aan soo hanaqaaday waxaan lahaa Han iyo Himilo ah in aan Soomaali caawiyo oo aan noqdo muwaadin waxtara dadkiisa iyo dalkiisa. Markii la ii doortay mudane Aqalka Sare (Senator For Galmudug) ayaan bilaabay qaybtii labaad ee socdaalkaas markaas oo aan ka furay magaalada Cadaado dugsi hoose oo ay hada wax ka bartaan dhallaan gaaraya 173 oo dhamaantood ah ubadka dadkii ku soo barakay colaadaha iyo abaaraha ka dhashay Qarnjabkeenii.
Dareenka aan ka qaaday u abuurista ubadkaas fursada nolol waxbarasho waxa ay i bartay in aysan Saboolnimadeenu Ahayn Hanti La’aan Ee Ay Tahay Rajo La’aan.
Mar labaad waxaa ii rumoobay han kale oo aan ku taamayey kaas oo ahaa sidii aan u caawin lahaa qayb ka mid ah dadka naafada ah, gaar ahaan kuwooda indhoolayaasha ah. Munaasabad aan ku daahfurayey Machadka Indhoolayaasha ee deegaanka Galmudug ayaa soo gebogebowday maanta oo Xafiiskeyga Adeega Dadweynaha ee magaalada Cadaado uu 10 Indhooleyaal ah ku tababaray sida loo isticmaalo Usha ay Indhoolayaashu keligood ku socdaan.
Ujeedada Machadkan ayaa ah in aan u abuuro dadka indhoolayaasha ah ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Galmudug aduunyo cusub iyo rajo aan soohdin lahayn, isla markaasna aan dareensiiyo in indho la’aantu aysan qeexi karin qofka iyo rajodiisa.
Runtii Rajada tobankaas qof waxa ay maanta ka bilaabatay markii tababarka loo bilaabay oo ay gacmahooda ku qabsadeen ULO ay ku socdaan iyaga oo keli ah.
Hadii Eebe Idmo waxaa xigi doonta munaasabadan albaab kale oo Rajo, taas oo ah Rajada Akhris-Qoraalka dadka araga la’, iyaga oo isticmaali doona “Braille”.
Kacaan Rajo Abuur Oo Run Ah Ayaa Inoo Bilowday
Xafiiska Adeega Dadwaynaha: Qaabilaaddii Farxaan Hadafoow
SENATOR Abshir Axmad
Waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed waana mudane metala Dowlad Goboleedka Galmudug.